Android Boot Camp - MYSTERY ZILLION
July 2012 edited July 2012 in Member ဆိုင်ရာ
<a target="_blank" href="http://goo.gl/wIDVW"><img src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/314884_3953641130803_392319023_n.jpg"/></a>;
Android Boot Camp ကို Aug 12, 2012 မှာလုပ်ဖို့ရှိပါတယ် စိတ်ဝင်စားတဲ့ မင်ဘာတွေအနေနဲ့ အောက်မှာပြထားတဲ့လင့်မှာ Register လုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအရေအတွက် အကန့်အသတ်ရှိတဲ့အတွက် တက်ရောက်မယ်ဆိုရင် Register လုပ်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ တက်ရောက်မယ် လူများအနေနဲ့ Programming Language အနေနဲ့ Java ကို အခြေခံအားဖြင့် ရေးတတ်ပြီးနားလည်တဲ့လူ ဖြစ်ရပါမယ် နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ Laptop ယူဆောင်လာဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ကောင်းရော! Laptop ယူလာရမယ်တဲ့။ ကျုပ် Laptop က Desktop သာသာ။ Adapter မရရင် ဖွင့်လို့ကို မရတာ။ သွားတော့ သွားကြည့်ချင်သား။ စိတ်ဝင်စားတယ်။
August 12 မှဆိုတော့ မပြောတတ်သေးပါဘူး။ ... :-?
အလာကောင်းပေမယ့် အခါနှောင်းခဲ့ပြီကွယ် မရတော့ဘူး နေရာပြည့်သွားပြီတဲ့ နေရာအကန့်အသတ်ရှိတယ်လို့ ပြောတယ်
Room 201 ဆိုမှတော့ အများဆုံးဆန့် နှစ်ဆယ် သုံးဆယ်ပေါ့။ ဒါတောင် ကြပ်သိပ်နေမှာ။ Staff တွေ Trainer တွေနဲ့ ... တော်ပါပြီ။ စိတ်ဝင်စားရင် Android Developers မှာပဲ စာသွားဖတ်တော့မယ်။ ~O)
အဲဒါတော့မသိဘူး ဘယ်အခန်းဘယ်လောက်ဆန့်မပြောနဲ့ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့နေရာကို တစ်ခါမှမရောက်ဖူးတာ :P